Muqdisho: 15 Ruux oo Ku Dhimatay Weerar Ismiidaamin Ah
Ku dhowaad 15 qof ayaa ku dhimatay qarax xooggan oo oo maanta ka dhacay meel u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, sida ay sheegeen goobjoogayaal.
Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid ismiidamin ah oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, waxaana baabuurkaasi la sheegay in lagu qarxiyey waddada u dhaxaysay Gaashaandhigga iyo Kulliyadda Jaalle Siyaad xilli uu halkaasi marayey taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Axmed Jimcaale Cirfiid oo maanta xilka la wareegay.
Taliyaha ayaa ka badbaaday weerarka ururka al-Shabab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Qarax labaad ayaa isna la sheegay inuu ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdishu, kaas oo aan la sheegin in uu geystay khasaare nafeed.
Qaraxayadan ayaa imanaya maalmo uun kadib markii uu Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahai Framaajo uu ku dhowaaqay dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabab. Wariyaha VOA C/qaadir Cabdulle aya warkan Muqdisho ka soo direy.
Dhageyso Qaraxa Muqdisho Ka Dhacay